Guqula iiPDF zakho zibe ziSelfowuni, zilungele iWebhu, Izinto ezinokwabiwa kunye | Martech Zone
Phantse wonke umntu unamatyala okusebenzisa, amaphepha amhlophe kunye nezibambiso zentengiso kwifomathi yePDF. Ngelixa izixhobo ezininzi zinabafundi bePDF kule mihla, abo bafundi abalungiselelwanga ukuba bafunde kwizixhobo ezinesakhono sokwabelana ngazo ngokwasentlalweni okanye bazifaka ngqo kumxholo wakho.
Incwadana elula inikeza usetyenziso olulula apho ungalayisha khona kwaye ubambe iincwadana zenziwe kwii-PDF zakho okanye ziyilelwe kwasekuqaleni. Iincwadana zingathunyelwa, ziphawulwe, zithunyelwe nge-imeyile, zabelwane, zithunyelwe nge-imeyile, zifakwe ngaphakathi kwaye zikhutshwe ngabathengi naphi na. Unokubonelela ngekhonkco kumaphepha okufika ukuze ubambe phambili.
Sebenzisa ikhonkco lethu lokudibana kwaye unokufumana I-55% ikhutshiwe yobhaliso lonyaka omnye kwi-SimpleBooklet HERO Plan.
Nantsi imbonakalo yevidiyo Incwadana elula:
Jonga igalari evuliwe Incwadana elula indawo yokubona imizekelo emikhulu yendlela abathengisi abalisebenzisa ngayo iqonga. Ungazama iqonga simahla. Qiniseka ukuba usebenzisa ikhonkco lokudibana kwaye unokufumana I-55% ikhutshiwe yobhaliso lonyaka omnye kwi-SimpleBooklet HERO Plan.
tags: Guqula i-pdfpdf ephathekayoamaphepha okuthengisapdf enokwabelwana ngayoIncwadana elulasebenzisa amatyalawhitepapers
Ezona ndlela zokuSebenza zoBuchule beB2B